मनै लोभ्याउने रारा ताल (फोटो फिचर)
By ourtourism news On : February 13, 2018
फाेटाे ः देवी कृष्न राेकाय रारा काे फेसबुकबाट
मुगु जिल्लामा अवस्थित रारा ताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो र गहिरो ताल हो । समुद्र सतहबाट २९९0 मी उचाईमा रहेको यो ताल लाई महेन्द्र दहको नामले पनि चिनिन्छ । १०.८ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको यस तालको गहिराई १६७ मी. सम्म रहेको छ ।
रारा ताल भ्रमण गर्न उपयुक्त समय सेप्टेम्बर देखि अक्टोबर र अप्रिल देखि मे महिनामा उपयुक्त हुन्छ । डिसेम्बर देखि मार्च महिनासम्म १ मीटर सम्म हिउ पर्ने हुदाँ यहाँको तापक्रम शुन्य भन्दा पनि तल हुने भएकोले यो समयमा उपयुक्त हुँदैन । यस तालको पानी सफा देखिन्छ । सतहबाट १४ देखि १५ मी. सम्मको गहिराई देख्न सकिन्छ ।
यस क्षेत्रमा १०७४ प्रजातिका विरुवा, ५१ प्रजातिका स्तनधारी र २१४ प्रजातिका चराहरु पाइन्छन । यस बाहेक हिउदको समयमा छिमेकी मुलुक चीन देखि अन्य प्रजातिका चराहरु प्नि बसाइ सरेर आउने र वर्षा लागेपछि चीन तर्पm नै फर्केर जाने गर्दछन ।
यस तालमा मध्यान्हको समयमा हावा चलेर समुद्रमा जस्तै छाल उत्पन्न हुने हुनाले उपयुक्त हुदैन ।
Previous Post Previous post: थप सुविधा सहित पर्वतिय संग्रहालय १५ अाै वर्षमा प्रवेश
Next Post Next post: नेपाल वायु सेवा निगममा थपिए दुई चिनियाँ जहाज, पर्यटक यात्रामा सहज